Nampisaritaka Ny Lalàna Vaovao Momba Ny Zon’ny Mpamorona Any Japana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Novambra 2012 20:44 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Dansk, Deutsch, Italiano, Français, 繁體中文, 简体中文, English
Nihatra ampahany nanomboka ny voalohany Oktobra lasa teo ka mahavoasazy ny fitrohana [telechargement] tsy ara-dalàna sy ny fikiahana DVD ho amin'ny fampiasana ho an'ny tena manokana ilay lalàna voahitsy momba ny fizaka-manana [copyright] any Japana. Raha voasambotra ny olona iray dia higadra hatramin'ny roa taona na voasazy handoa onitra 2 tapitrisa yen, izay manakaiky ny 25.680 dolara Amerikana.
Efa nampiseho ny ahiahiny amin'ity lalàna vaovao ity ny mpisera aterineto. Efa namoaka fanambarana [ja] ho fanoherana ny lalàna ireo hetsika maro miaro ireo mazoto misera aterineto tamin'ny mbola vita volavola.
Ny tanora tsy dia misy fotoana hahazoana ny lalàna no tena ho tratrany
Malalaka sy sarotra itsarana ny famaritana ny ara-dalàna sy tsy ara-dalàna
Mety hitarika mankany amin'ny fihoara-pahefan'ny polisy izany
Mila adihevitra ifanazavana tsara io
Ny ho voasazy no niteraka saritaka sy tahotra teo amin'ny mpisera aterineto. Hevitra iray ao amin'ny Twitter no manazavazava ny fomba fivadihan'ny fampahalalana ho fahadisoam-baovao [diso fandraisana vaovao]:
Izao no mampiova ny vaovao. “Sazy amin'ny fitrohana [telechargement] tsy manara-dalàna manomboka amin'ny 1 oktobra” –> “Fanasaziana ho an'ny vohikala manitsakitsaka ny Copyright” –> ” fanitsakitsahana ny fizaka-manana [copyright] ve ny sangan'asa nitarina [nosintonina] avy aminy?” –> ” Voarara ny fanaovana itatr'asa [miainga avy amin'ny zavatra efa nisy namorona na sinton'asa ihany koa?] manomboka amin'ny 1 oktobra” –> “Soniavo ny fanangona-tsonia! ilaina ny sonia 100.000 na hikatona ny sarimihetsika niconico, habaka pixiv sy ireo mpaninjara mahaleotena!” Jereo anie ny fahadisoam-[baovao] rehefa tonga any amin'ny farany.
Misy ny mpisera Twitter mandefa fampitandremana momba ny fahadisoam-baovao. Milaza ny mpisera @fu_ryukei:
Mahita sioka sasantsasany aho milaza fa “mandrara ny itatr'asa [sinton'asa? derivative work] manomboka amin'ny 1 Oktobra” fa tsy marina izany. Ny fanasaziana amin'ny fitrohana tsy ara-dalàna no manomboka amin'ny 1 Oktobra. Tsy miresaka fandraràna itatr'asa [sinton'asa?] io.
Nisy mpisera hafa koa nampitandrina:
Tsy misy izany “Lalàna momba ny fandraràna itatr'asa [sinton'asa]” izany. Tsaho diso izany. Saingy, ny sinton'asa tsy nahazoana alalana avy amin'ny mpamorona dia fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona [copyright]. Fandikàn-dalàna mety hitsarana anao raha vao misy mitory, koa raha mibaiko na miangavy ny hanesorana azy ny mpamorona, dia mety ho any amin'ny fitsarana ny vokatr'izany. Aorian'ny voalohany Oktobra, raha mitroka sinton'asa tsy nahazo alalana avy amin'ny mpamorona ianao dia mety ho voasazy raha voatory.
Ny 24 Jolay, namoaka fanontaniana niverina matetika [ja] momba ny lalàna ny sampan-draharaha Japoney misahana ny raharahan-kolontsaina, saingy sarotra ny hilaza fa hitondra famariparitana mahatafiditra ny zavatra rehetra sy hahatakaran'ny olona ny momba ny fizaka-manana ny antsipirihan'ny zava-boalaza ao. Namoaka ny antsipirihan-dalàna vaovao momba ny fizaka-manana [copyright] ihany koa ny sampan-draharaham-panjakana misahana ny fifandraisana amin'ny daholobe. Voazavazavan-dry zareo ao amin'ny takelaka [ja] fa ny tanjon'ny lalàna dia ny hisorohana amin'ny piraty izay manimba ny tombontsoan'ny mpisitraka izany, tahaka ny ampaham-bola azo avy amin'ny fanapariahana sangan'asa andoavam-bola sy ny fivarotana CD sy DVD.
Misy mpisera Twitter iray nijery todika tamin'ny adihevitra amin'ny fanasaziana ny fitrohana tsy ara-dalàna rehefa hita fa Japana no mitana ny lohany amin'ny fividianana CD isaky ny mpanjifa; mandany ny vola betsaka indrindra manerantany:
Ka inona moa izany no nahatonga ny fampidirana ny fanasaziana ny fitrohana tsy ara-dalàna ho an'ny mitàna ny lohany? .@biac_ac Indro ny rohy manatsonga ny fihetseham-pon'ny mpisera Twitter izay nahita fa Japana no mpanjifa CD betsaka indrindra manerantany, araka ny fandaharan'ny fahitalavitra. togetter.com/li/361017
Hajian-tsarin'i HikingArtist.com CC BY NC-ND 2.0